Sidee isbitaal ku yaala Muqdisho loogu xaday Canug lagu dhashay
Dhacdo ka dhacday isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho ayaa aad loo hadal hayaa, taasi oo ku aadan in isbitaalka SOS laga xaday canug ay dhashay haweeney ku sugneyd Isbitaalka.
Naciima Maxamed Maxamuud ayaa dhashay canuga yar ee la sheegay in lagu xaday Isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho, waxaana xiligaasi la sheegay inay huraday haweeneyda.
Sidoo kale dadka la joogay Hooyo Naciimo Maxamed ayaa la sheegay inay salaad soo aadeen, Markii ay ku noqdeen qolkii ay ku jirtayna waxay waayeen canuga, sida aabaha uu warbaahinta u sheegay.
Markii falka uu dhacay kadib waxaa lagu guul dareystay baaritaan lagu sameeyay cidda qaaday canuga oo ilaa iyo hadda la sheegay inuu ka maqan yahay Hooyada Dhashay oo lagu magacaabo Naciimo Maxamed Maxamuud.
"Markii aan Xaafadda tagay oo aan rabay inaan cashadii qaado ayaa la isoo wacay waxaa la ii sheegay wiilkii in la qaatay waan soo cararray, Isbitaalka ayaan imid wax ku fiirinaayo & wax kuu jawaabaayo malahan, meelaha qaarna inaad gasho lama ogala”
"Qolka dad badan ayaa joogay, laakiin gabar yar ayaa qolka dhex joogtay oo agteena joogtay; dadkana waxa ay u maleynayeen inay anaga nala joogtay. Waa qadar Alle, balse waxaan la yaabanahay dayaca Isbitaalka ku jira ee ilmo yar irida loogala baxay, waa Cunugii iigu horeeyay.” Ayuu yiri Aabe Mustaf.
Waa dhacdo ku cusub shacabka magaalada Muqdisho, waxaana masuuliyiinta isbitaalka ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dhacdada ka dhacay gudaha Isbitaalka.
Qaraxyo lagula eegtay deegaanka Buurane ciidamo AMISOM
Muungaab "Magaalada dhagax waa dhaaftay in lagu xiro, Ganjeelo ayay gaartay in laamiga lagu xiro"